The OPPO Reno2 ga-eweta na August 28 na eze | Gam akporosis
OPPO hapuru anyi n’afọ a ohuru ohuru nke igwe Reno, nke ha gosipụtara otutu uzo. A nso nke na-enyere ndị China emeputa mma ya mba ọnụnọ. Ruo ugbu a, ha hapụrụ anyị ọtụtụ ụdị, dị ka Z nke malitere na Spain. Companylọ ọrụ ahụ mara ọkwa ngosi nke OPPO Reno2.
OPPO Reno2 bụ aha ha nyere ọgbọ ọhụụ ekwenti n'ime ezinụlọ a. Anyị nwere ike ịtụ anya igwe ọhụrụ na mpaghara a, nke na-apụta dị ka ọkwa ọhụrụ nke ndị nrụpụta. Ọ dabara, na-eche ihu iru igwe ndia ọ ga-adị mkpụmkpụ.
Ebe ọ bụ na dị ka ha kwurula, A ga-enye OPPO Reno2 na August 28 na ọkwa. Companylọ ọrụ ahụ ga-eme ihe omume na India n'okwu a, ebe ha ga-eweta ekwentị. Anyị amaghị ma ha ga-ahazi ọzọ na Europe ma emechaa, dị ka ha mere na oge opupu ihe ubi, mana ọ gaghị abụ ihe iju anya ịhụ ha na IFA 2019 na ọkwa.
N'oge a enwere okwu banyere otu ekwentị, ọ bụ ezie na ihe nkịtị bụ na ha ga-agbaso ụdị ọhụrụ na ọgbọ nke abụọ a. Mana maka ugbu a na Ọgọstụ 28 anyị ga-ezute ekwentị izizi n'ime ụdị ọhụụ a nke akara ndị China. O yiri ka nkwụsi ike vidiyo ga-abụ isi ike.
Anyị pụrụ ịhụ na nke a OPPO Reno2 doo anyị na a yiri ụdị ahụ anyị hụworo n'ọgbọ nke mbụ, na shark fin n'ihu igwefoto, imewe nke mepụtara ọhụrụ ma bụrụzie akara ngosi nke ika ahụ. Anyị enweghị data na nkọwa ya n'oge a.
Ya mere, na August 28 anyị ga-ahapụ obi abụọ banyere ọgbọ ọhụrụ a. O doro anya na, ịhụ otú ọgbọ mbụ si dịrị, anyị ji n'aka na OPPO Reno2 a ga-abụ ekwentị na-adọrọ mmasị. Anyị ga-elebara anya na akụkọ enwere ike gbasara ekwentị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » OPPO Reno2 enweela ụbọchị ngosi ngosi